7 Na ɔsɔfo panyin no bisae sɛ: “Nsɛm yi te saa anaa?” 2 Ɔkae sɛ: “Mmarima, anuanom ne agyanom, muntie. Anuonyam Nyankopɔn+ no yii ne ho adi kyerɛɛ yɛn nana Abraham, bere a na ɔwɔ Mesopotamia ansa na ɔrekɔtena Haran+ no, 3 na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ‘Fi w’asase so ne w’abusua mu na kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so.’+ 4 Enti ofii Kaldeafo asase so kɔtenaa Haran. Afei bere a ne papa wui akyi+ no, Onyankopɔn ma otu bɛtenaa asase a mote so seesei no so.+ 5 Nanso wamma no bi sɛ agyapade, wannya ɔnammɔn biako mpo;+ na mmom ɔhyɛɛ bɔ sɛ ɔde bɛma no sɛ agyapade,+ na n’akyi no ɔde bɛma n’asefo,+ nanso saa bere no na onni ba.+ 6 Bio nso, Onyankopɔn kaa eyi ho asɛm sɛ n’asefo bɛyɛ ahɔho+ wɔ ananafo asase so+ na nkurɔfo no de wɔn bɛyɛ nkoa adi wɔn ani mfe ahanan.+ 7 Onyankopɔn kae sɛ, ‘Mebu ɔman a wɔde wɔn bɛyɛ nkoa no atɛn,+ na eyinom akyi no, wobefi hɔ na wɔabɛsom me wɔ ha.’+ 8 “Ɔmaa no twetiatwa apam+ nso; enti ɔwoo Isak,+ na da a ɛto so awotwe no otwaa no twetia,+ na Isak woo Yakob, na Yakob woo mmusua dumien no agyanom.+ 9 Na mmusua ti no ani beree+ Yosef na wɔtɔn no kɔɔ Egypt.+ Nanso na Onyankopɔn ka ne ho,+ 10 na ogyee no fii n’ahohia nyinaa mu maa no adom ne nyansa wɔ Egypt hene Farao anim. Na ɔpaw no sɛ ɔnhwɛ Egypt ne ne fie nyinaa so.+ 11 Na ɔkɔm baa Egypt ne Kanaan nyinaa, ahohiahia kɛse mpo, na na yɛn agyanom nnya aduan.+ 12 Na Yakob tee sɛ aduan wɔ Egypt+ na ɔsomaa yɛn agyanom nea edi kan.+ 13 Na ne mprenu so no, Yosef yii ne ho adi kyerɛɛ ne nuanom,+ na Farao huu Yosef abusuafo.+ 14 Enti Yosef soma ma wɔkɔfaa ne papa Yakob ne n’abusuafo nyinaa fii hɔ bae,+ akra a wɔn dodow si aduɔson anum.+ 15 Yakob kɔɔ Egypt.+ Na owui;+ na yɛn agyanom nso wuwui saa ara,+ 16 na wɔde wɔn kɔɔ Sekem+ kosiee wɔn ɔda+ a Abraham de dwetɛ sika tɔe wɔ Hamor mma nkyɛn wɔ Sekem no mu.+ 17 “Na bere reyɛ aso ama bɔhyɛ a Onyankopɔn de maa Abraham pefee no aba mu no, nnipa no bɛdɔɔso na wɔyɛɛ bebree wɔ Egypt,+ 18 kosii sɛ ɔhene foforo bedii ade wɔ Egypt a na onnim Yosef.+ 19 Ɔno na ɔde anifere dii yɛn abusua no so+ hyɛɛ agyanom wɔ ɔkwammɔne so sɛ wonnyaw wɔn mma nkokoaa hɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wobewuwu.+ 20 Saa bere no ara na wɔwoo Mose,+ na na ne ho yɛ fɛ yiye Onyankopɔn anim.+ Na wɔhwɛɛ no wɔ ne papa fie asram abiɛsa. 21 Na bere a wogyaw no too baabi no, Farao babea faa no tetee no sɛ n’ankasa ba.+ 22 Enti wɔkyerɛɛ Mose Egyptfo nyansa+ nyinaa. Nokwarem no, na ɔwɔ tumi wɔ ne kasa+ ne nnwuma mu. 23 “Afei bere a odii mfe aduanan no, ɛbaa ne komam sɛ ɔbɛkɔ akɔhwɛ ne nuanom, Israel mma no.+ 24 Na ohui sɛ wɔreyɛ obi bɔne no, ogyinaa n’akyi dii were maa nea wɔreyɛ no bɔne no kum Egyptni no.+ 25 Osusuwii sɛ ne nuanom behu sɛ Onyankopɔn nam ne nsa so regye wɔn,+ nanso wɔanhu no saa. 26 Na ade kyee no, ɔkɔtoo wɔn sɛ wɔreko, na ɔbɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛka wɔn abom bio ama asomdwoe aba wɔn ntam,+ na ɔkae sɛ, ‘Mmarima, moyɛ anuanom. Dɛn nti na moyɛ mo ho bɔne?’+ 27 Na nea ɔreyɛ ne yɔnko bɔne no bɔɔ no gui, na ɔkae sɛ, ‘Hena na ɔpaw wo sodifo ne ɔtemmufo wɔ yɛn so?+ 28 Wopɛ sɛ wukum me sɛnea nnɛra wukum Egyptni no anaa?’+ 29 Asɛm yi maa Mose guanee, na ɔkɔyɛɛ ɔhɔho wɔ Midian+ asase so, na ɛhɔ na ɔwoo mma baanu.+ 30 “Na mfe aduanan dui no, ɔbɔfo bi yii ne ho adi kyerɛɛ no Bepɔw Sinai sare so wɔ nkyɛkyerɛ bi a ɛredɛw mu.+ 31 Ade a Mose hui yi yɛɛ no nwonwa.+ Na ɔrebɛn ho akɔhwɛ no, Yehowa kasae sɛ, 32 ‘Mene w’agyanom Nyankopɔn, Abraham ne Isak ne Yakob Nyankopɔn.’+ Ehu kaa Mose ma enti wannya akokoduru sɛ ɔbɛkɔ akɔhwɛ dekode no bio. 33 Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ, ‘Yi wo nan ase mpaboa, na baabi a wugyina no yɛ asase kronkron.+ 34 Nokwarem no, mahu sɛnea wɔredi me nkurɔfo a wɔwɔ Egypt no ani,+ na mate wɔn apinisi+ na masian sɛ merebegye wɔn.+ Na afei bra, mɛsoma wo akɔ Egypt.’+ 35 Mose yi a wɔpaa no kae sɛ, ‘Hena na ɔpaw wo sodifo ne ɔtemmufo?’+ no, ɔno na Onyankopɔn nam ɔbɔfo a oyii ne ho adi kyerɛɛ no wɔ nkyɛkyerɛ mu no nsa so somaa no+ sɛ sodifo ne ogyefo. 36 Ɔbarima yi na oyii wɔn;+ ɔyɛɛ anwonwade ne nsɛnkyerɛnne wɔ Egypt+ ne Po Kɔkɔɔ+ no mu ne sare no so mfe aduanan.+ 37 “Mose yi na ɔka kyerɛɛ Israel mma sɛ, ‘Onyankopɔn beyi odiyifo bi a ɔte sɛ me afi mo nuanom mu ama mo.’+ 38 Oyi+ na na ɔka ɔbɔfo+ a ɔkasa kyerɛɛ no Bepɔw Sinai so no ho a ɔbaa asafo+ no mu ne yɛn agyanom nkyɛn wɔ sare so no, na onyaa nkwa nsɛm kronkron+ a ɔde bɛma mo. 39 Yɛn agyanom anyɛ osetie amma no, mmom no wɔpoo no,+ na wɔn koma mu no wɔsan kɔɔ Egypt,+ 40 na wɔka kyerɛɛ Aaron sɛ, ‘Yɛ anyame ma yɛn ma wonni yɛn anim. Na Mose yi a odii yɛn anim fii Egypt asase so no, yennim nea ato no.’+ 41 Enti wɔyɛɛ nantwi ba bi nna no mu+ bɔɔ afɔre maa ohoni no na wofii ase gyee wɔn ani wɔ wɔn nsa ano adwuma ho.+ 42 Enti Onyankopɔn dan ne ho na ogyaa wɔn+ ma wɔsom ɔsoro asafo, sɛnea wɔakyerɛw wɔ adiyifo no nhoma mu no sɛ,+ ‘O Israel fie, so ɛyɛ me na mode afɔrebɔde ne ayɛyɛde brɛɛ me wɔ sare so mfe aduanan no?+ 43 Mmom no, ɛyɛ Molok+ ntamadan ne Refan nyame nsoromma+ na mofae, ahoni a moyɛe sɛ mobɛsom wɔn no. Enti metwa mo asu+ akɔ Babilon akyi nohoa.’ 44 “Yɛn agyanom nyaa adanse ntamadan no wɔ sare no so, sɛnea ɔhyɛɛ Mose bere a ɔrekasa akyerɛ no sɛ ɔnyɛ no te sɛ nhwɛsode a ohui no.+ 45 Na yɛn agyanom a wonyae no ne Yosua+ de baa aman a Onyankopɔn yii wɔn fii yɛn agyanom anim+ no asase a na wɔte so+ no so. Ɛtenaa ha ara besii Dawid bere so. 46 Onyaa Onyankopɔn anim dom+ na obisaa hokwan a ɔde besi tenabea+ ama Yakob Nyankopɔn. 47 Nanso, Solomon na osii ofie maa no.+ 48 Na asɛm no ne sɛ, Ɔsorosoroni no nte afie a wɔde nsa asi mu,+ sɛnea odiyifo no kae sɛ, 49 ‘Ɔsoro yɛ m’agua,+ na asase yɛ me nan ntiaso.+ Ofie bɛn na mubesi ama me? Yehowa na ose. Anaasɛ ɛhe ne me homebea?+ 50 Ɛnyɛ me nsa na ɛyɛɛ nneɛma yi nyinaa?’+ 51 “Nnipa a moasen mo kɔn na moyɛ koma ne aso mu momonotofo,+ bere nyinaa moko tia honhom kronkron no; sɛnea mo agyanom yɛe no, saa ara na moyɛ.+ 52 Adiyifo no mu hena na mo agyanom antaa no?+ Yiw, wokum+ wɔn a wɔkaa Ɔtreneeni+ a ɔreba no ho asɛm too hɔ no; nea mprempren asodi da mo so sɛ mo na muyii no mae na mukum no+ no, 53 mo a munyaa Mmara no sɛnea abɔfo+ de mae no, nanso moanni so.” 54 Wɔtee eyi no, ɛwowɔɔ wɔn komam+ na wofii ase twɛree+ wɔn sẽ guu no so. 55 Nanso esiane sɛ honhom kronkron ayɛ no mã nti, ɔhwɛɛ soro dinn huu Onyankopɔn anuonyam ne Yesu sɛ ogyina Onyankopɔn nsa nifa,+ 56 na ɔkae sɛ: “Hwɛ! Mihu sɛ ɔsoro abue+ a onipa Ba+ no gyina Onyankopɔn nsa nifa.”+ 57 Ɛnna wɔde nne kɛse teɛteɛɛm, na wɔde wɔn nsa sisiw wɔn aso+ na wɔn nyinaa tuu bum kɔɔ no so. 58 Na wɔde no fii kurow no mu no,+ wofii ase siw no abo.+ Na adansefo+ no de wɔn ntade nguguso guu aberante bi a wɔfrɛ no Saul+ nan ase. 59 Na wogu so resiw Stefano abo no ɔsrɛe sɛ: “Awurade Yesu, gye me honhom.”+ 60 Afei, obuu nkotodwe de nne kɛse teɛɛm sɛ: “Yehowa, mmu bɔne yi ntia wɔn.”+ Na ɔkaa saa no ɔdae wɔ owu mu.